တလွဲသုံးလေ့ရှိသော စကားလုံးများ အပိုင်း (၂) - Myanmar Network
တလွဲသုံးလေ့ရှိသော စကားလုံးများ အပိုင်း (၂)
Posted by Soe Soe Win on December 15, 2014 at 12:12 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Insure နှင့် ensure
ဒီတစ်ခုကတော့ လွယ်ပါတယ်။ Insure ကတော့ အာမခံ ကိုဆိုလိုတာပါ။ Ensure ကတော့ သေချာအောင် လုပ်တာပါ။
So if you promise an order will ship on time, ensure it actually happens (ဒါဆို သင်က အမှာစာကို အချိန်မီရောက်မယ်လို့ ကတိပေးထားရင် သေချာအောင်လုပ်ပါ။)
Unless, of course, you plan to arrange for compensation if the package is damages or lost – then feel free to insure the way. (ပစ္စည်း (သို့) အထုပ်ပျက်စီး (သို့) ပျောက်သွားသော် လျော်ပေးဖို့ စီစဉ်ထားရင်တော့ နည်းလမ်းကို စိတ်ကြိုက် အာမခံလိုက်ပါ။)
Number နှင့် amount
ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြဲကို အိုးနင်းခွက်နင်းဖြစ်ပါတယ်။ number ကို ရေတွက်လို့ရတဲ့အရာကို ရည်ညွှန်းလိုသည့် အခါတွင် အသုံးပြုပါ။
“The number of subscribers who opted out increased last month” (ပြီးခဲ့တဲ့လက ထွက်သွားတဲ့ မှာယူသူ (ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူ) ဦးရေပိုများလာတယ်။)
Amount ကိုတော့ ရေတွက်လို့မရတဲ့ ပမာဏကို ရည်ညွှန်းလိုတဲ့အခါမှာ အသုံးပြုပါ။
“The amount of alcohol consumed at out last company picnic was staggering”. (ကုမ္ပဏီရဲ့ နောက်ဆုံး ပျော်ပွဲစားမှာ သောက်သုံးလိုက်တဲ့ အရက်ပမာဏကတော့ မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။)
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါကလဲ ဝေခွဲရခက်စေပါသေးတယ်။ ကိုယ်သောက်ခဲ့တဲ့ ဘီယာဘူး၊ ပုလင်း အရေအတွက်ကိုတောင် ကိုယ်မသိဘူးလို့ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ဗူးနဲ့ ပုလင်းတွေဟာ ရေတွက်လို့ရတဲ့အတွက် "I can't believe the number of beers I drank" လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် “I can’t believe the amount of beer I drank” (ငါသောက်ခဲ့တဲ့ ဘီယာ ပမာဏကို ငါမယုံနိုင်ဘူး) ဆိုတာလဲမှန်ပါတယ်။ ကွာခြားချက်ကတော့ ဘီယာ ဗူးနဲ့ ပုလင်းတွေကို ရည်တွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘီယာဆိုတာမျိုးက အထူးဖြင့် သောက်ထားတာ ဘယ်လောက်လဲ လိုက်မှတ်ဖို့အတွက် အရမ်းမူးနေပြီဆိုရင်တော့ မရေတွက်နိုင်တာဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒါကြောင့် amount ကို အသုံးပြုရပါမယ်။
Precede နှင့် proceed
Precede ဆိုတာကတော့ တစ်စုံတစ်ခု မတိုင်ခင်လာတာကို ပြောချင်တာပါ။ Proceed ကတော့ စလုပ် (သို့) ဆက်လုပ် လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ဘယ်အချိန်မှာ ရှုတ်ထွေးလာလဲဆိုတော့ “ing” နဲ့ ပြောင်းတဲ့အခါမှာ ရှုတ်လာတာပါ။ “the proceeding announcement was brought to you by…” (ယခုလက်ရှိ ကြေငြာချက်ကို ဆောင်ယူလာပေးတာကတော့…) ဆိုတာ မမှားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကြောငြာချက်က အရင်ဦးဆုံးလာတဲ့အတွက်“preceding” ကတော့ ပိုမှန်ပါတယ်။
It’s နှင့် Its
It’s ဆိုတာကတော့ it is ရဲ့ အတိုကောက်ပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ It’s က ပိုင်ဆိုင်မှုကို ညွှန်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အကယ်၍ သင့်ခွေးရဲ့ လည်ပတ်က အပြာရောင်ဆိုရင် "it's collar is blue" လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ “Its collar is blue” လို့ပြောရပါမယ်။ အလွယ်တကူ အသုံးချနိုင်ဖို့အတွက် စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ apostrophe ကို သုံးတဲ့အခါတိုင်း စာလုံးကို အရှည်ဖြန့်ပြီး ကြားရတာ ဘယ်လိုလဲဆိုတာကို နားထောင်ကြည့်ပါ။ ဥပမာအနေနဲ့ "it's sunny." (နေသာနေတယ်) ဆိုတဲ့ ဝါကျကို ကြည့်ရအောင်။ ဒီကိစ္စမှာဆိုရင်တော့ it’s ကို it is ပေါ့။ “It’s sunny” ကနေ “it is sunny” ဖြစ်သွားပါတယ်။ နားထောင်လို့တော့ အဆင်ပြေသားပဲ။ ဒါဆိုရင် ဒီလိုသုံးသွားတာ မှန်တယ်လို့ ပြောလို့ ရပြီပေါ့။
They’re နှင့် their
ဒီဟာလဲ ထိုနည်း၎င်းပါပဲ။ they’re ကတော့ they are ကို အတိုချုံ့ထားတာပါ။ နောက်တစ်ခေါက်အနေနဲ့ ပြောရရင် they’re က ပိုင်ဆိုင်မှုကို ညွန်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။
“We’re going to their house, and I sure hope that they are home” (ငါတို့ သူတို့အိမ်သွားလည်ကြမယ်။ သေချာပေါက် သူတို့ အိမ်မှာရှိနေပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။)
You’re နှင့် your
နောက်တစ်ခုပါ။ You’re က You are ရဲ့ အတိုကောက်စာလုံးပါ။ Your ဆိုတာကတော့ သင် ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကို ပြတာပါ။ you’re မှာ ပါဝင်တဲ့ apostrophe က ဘာပိုင်ဆိုင်မှုကိုမှမပြပါဘူး။ အချိန်တော်တော်ကြာကြာကြီးကို ဒေသခံ NGO အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ဆိုင်းဘုတ် အကြီးကြီးတစ်ခုထောင်ထားတာ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ရေးထားတာကတော့ “You’re Community Place” တဲ့။ “You Are Community Place”? (သင်သည် လူစု နေရာဖြစ်သည်) တဲ့။ တကယ်ဆိုလိုချင်တာက "Your Community Place" (သင်၏ လူထုစုဝေးရာနေရာ/သင် အခြားလူများနှင့် တွေ့ဆုံဆက်ဆံနိုင်သော နေရာ) လို့ ပြောလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
Inc.com မှ Jeff Haden ရဲ့ 32 Incorrectly Used Words That Can Make You Look Bad ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
တလွဲသုံးလေ့ရှိသော စကားလုံးများ အပိုင်း (၁)
အလားအလာများကို အင်္ဂလိပ်စကားဖြင့် ဖော်ပြခြင်း (Describing Trends in E...
မရှိမဖြစ်သော စကားလုံး "Get"
Permalink Reply by Nwe Nwe Khaing on January 13, 2015 at 9:47